कतै जाँदै हुनुहुन्छ ? आज दिनभर यी रुटमा सवारीसाधन चलाउन मिल्दैन – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/कतै जाँदै हुनुहुन्छ ? आज दिनभर यी रुटमा सवारीसाधन चलाउन मिल्दैन
काठमाडौं- महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) अन्तर्गत आज (शनिबार) बिहान उपत्यकाभित्र म्याराथन दौड भएकाले अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन नचलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
शनिबार बिहान ७:०० देखि ११:०० बजेसम्म म्याराथन दौड हुँदा उपत्यकाका मुख्य सडक क्षेत्रमा अत्यावश्यकबाहेकका सवारी नचलाउन महाशाखाले एक सूचना नै जारी गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल– रविको कुटपिट, मोहनको मेकअप र नेताको रातो पिर्का !
कतारका लागी झोला बोकेर घरबाट हिँडेका ३ हजार बढी कामदार को’रोनाका कारण रोकिए